Electric Bike, Electric mooto, Curyaanka Electric, Baby riixo - Raaxada Vehicle
baabuur Old halkii socodka
Tani wargeyska on shalay December 16 (Wariyaha xilli reporter Ssangyong ma), gaari socodka dadka waayeelka ah ay maamusho ayaa laga yaabaa gal jidka weyn. Thanks to booliska-xawaaraha sare ee gaadiidka laga helo wakhti, baabuur this halkii socda galbiyeen by xawaare sare doono, si looga fogaado halis ah. Just sida baabuur QQ, ...
10 siyaabood oo ah E-baaskiil badbaadin kartaa lacag
Haddii aad ku fekereyso in aad iibsanayso ah E-baaskiil, laakiin ma hubo oo ku saabsan faqri lacagta, qodobkan caawin kara inaad dejinayaan go'aanka saxda ah. Haddii aad u isticmaasho, ah E-baaskiil dhab ahaantii waxaad badbaadin kartaa lacag iyo bixin nafteeda in wakhti yar oo gaaban. Comfortebike.com ayaa sameeyay liiska 10 siyaabood oo ah baaskiil korontada c ...
CF-TDN01Z-4 (5) hore 36V250W 20inch / gadaal cajalid b ...
20inch CF-TDN03Z Electric xamuulka Bike
20inch CF-TDN01Z Electric Fat Bike
CFBS-004 style New riixo ilmaha korontada
CF-BS001 Baby riixo la System Electric
CF-002 riixo ilmaha